Himalaya Salt Procuts Manufacturers & Suppliers - China Himalaya Salt Procuts Factory
Himalayan Salt Bricks blocs sira 8x4x2 ho an'ny rindrin'ny efitra sira
Afaka manolotra: santionany maimaim-poana, serivisy fanadiovana mahazatra, fanohanana ara-teknika, serivisy 7 * 24 ora.
Ny biriky sira dia azo ampiasaina ho toy ny gorodona sy rindrin'ny efitrano fitsaboana sira, jiro jiro ary haingon-trano. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny jiro sira sy fonosana mafana ho famenoana.
Shina mavokely himalayan sira lick biriky taila ho an'ny efitra sira
Ny jiro sira (jiro sira) dia vita amin'ny akora sira kristaly voajanahary amin'ny tanana. Misy lavaka ny afovoany, apetraka ny jiro, ary ny seza ambany dia misy fitaovana hanaovana ny jiro sira. Ny jiron'ny sira dia miteraka ion ratsy amin'ny fanafanana ny takamoa ao anatiny.
Vidiny sira mora vidy
Ny toetra mampiavaka ny vato kristaly sira: Manankarena amin'ny mineraly am-polony sy ny singa trace ilain'ny vatan'olombelona. Ny sira kristaly Himalaya dia misy fluoride sodium mihoatra ny 98%, ary ny singa sisa dia ahitana vy, calcium, magnesium, potassium, aliminioma, zinc, gallium, silisiôma, sns. Ny filana mineraly dia "sira" marina. manana rafitra kristaly tonga lafatra, izay misy angovo mahery vaika. Taorian'ny famoretana an-jatony tapitrisa taona, dia manolotra kristaly tonga lafatra ...